Kheyre: Sax ma ahan in Ciidamo ay ku jiraan guddiyada doorashada | KEYDMEDIA ONLINE
Kheyre: Sax ma ahan in Ciidamo ay ku jiraan guddiyada doorashada
Ra'isul wasaarihii hore ee dalka ahna musharax Xasan Cali Kheyre ayaa qoraal uu bartiisa Twitter soo dhigay ku cambareeyay caawa Gudiyadda doorashada oo laga soo abaabulay Villa Soomaaliya.
Kheyre oo soo noqday Raisul Wasaarihii 19aad ee dalka ayaa xaqiijiyay jiritaanka Warqad maanta ay soo saareen 12 musharax oo ay ka digeen laba qodob oo aad u muhiim u ah taasoo ku aaddan guddigii doorashada ee dhawaan lasoo magacaabay.
"Aniga oo aaminsan in ciidamada amnigu ay hayaan shaqo qaran oo aad muhiim u ah ayna naga mudan yihiin sharaf iyo karaamo, hadana sax ma aha inay ka mid noqdaan guddiyada madaxa bannaan ee doorashooyinka." ayuu Kheyre kusoo qoray bartiisa Twitter iyo Facebook.
Aniga oo aaminsan in ciidamada amnigu ay hayaan shaqo qaran oo aad muhiim u ah ayna naga mudan yihiin sharaf iyo karaamo, hadana sax ma aha inay ka mid noqdaan guddiyada madaxa bannaan ee doorashooyinka.
— Hassan Ali Khaire (@HassanAKhaire) November 10, 2020
Kheyre ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay in ay dhacdo "xor ah, xasilloon, wadar-oggal ah oo waqtigeeda ku qabsoonta".
Xubnahan musharaxaxiinta ee maanta markoodii ugu horreeysay soo saaray qoraal ay ku mideysan yihiin waxay tilmaamayaan walaaca iyo welwelka ay ka qabaan doorashada soo socota, waxay kaloo caddeeyeen in xulidda ergada loo qorsheeyay in la musuq maasuqo taasoo ay tilmaameen in ay suura gal tahay in mar kale bur bur ku yimaado dowlad nimada Soomaaliya.
Madasha Xisbiyada Qaran ayaa sidoo kale qoraal ay soo saareen waxay aad ugu cambaareeyeen hanaanka loo soo xulay guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee heer Federaalka.
Keydmedia Online ayaa muddo labo billood ka hadleysay qorshaha Madaxweyne Farmaajo iyo Agaasimaha Hay'adda Nabad sugidda ee NISA Fahad Yaasin, kuwaaso afduubtay guddiyadda doorashada ee maamullada Galmudug, Koofur galbeed, Hirshabelle.
Qorshaha socda, oo Keydmedia Online warbixinno badan kasoo qortay maalmihii u dambeeyay ayaa walaac ku beeray Musharaxiinta kale, iyadoo cabsida la qabo ay tahay inay dhici wayso doorasho xor iyo xalaal ah, oo si siman loogu tartamo, wuxuuna Farmaajo dalka u wadaa dagaal sidee KON u sheegen Xeeldheereyaasha ay la hadashay.
Kheyre ayaa noqonaya musharaxii labaad oo xaqiijinaya Macluumaadka ay Keydmedia Online markii ugu horeysay shaaca ka qaaday.
Taliyaha AFRICOM oo fariin u gudbiyay Axmed Madoobe
Warar 15 May 2021 19:50
Trump ayaa Ciidanka Mareykanka ka saarey Soomaaliya bishii January kahor inta uusan ka tagin Aqalka Cad.
Keydmedia oo xuseysa maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed (SYL)
Warar 15 May 2021 14:09
Ciidan tababar kusoo qaatay Jabuuti oo dib usoo laabtay
Warar 15 May 2021 9:54
Rooble iyo Caleema Saarka Geellaha Jabuuti
Warar 15 May 2021 9:13